KUTHENI IPRINTA YAM YECANON MX922 INGASHICILELI? - IBHLOG
Kutheni iPrinta yam yeCanon MX922 ingashicileli?
Kutheni iCanon MX922 ingashicileli?
Ngamanye amaxesha ngenxa yesiphoso sobuchwephesha, iprinta yeCanon MX922 iyayeka ukusebenza okanye inokuba yimizekelo emininzi eyahlukeneyo emisa ukusebenza okuqhelekileyo komshicileli ngelixa ushicilela. Ngoku ukuba ufuna ukwazi ukuba inokuba yintoni na imeko yeCanon MX922 engashicileli ke nantsi eminye imicimbi edweliswe apha ngezantsi;
Kungenxa yokuba umshicileli akaxhunyiwe ngokufanelekileyo kwi-intanethi.
Isenokuba ngenxa yeeprinta zeinki zeprinta ezingenanto.
Okanye inokuba kungenxa yokuba iphepha linokuxinana.
Abaqhubi beprinta abanakho ukuhlaziywa.
Iintambo zeprinta zinokukhubazeka kwindawo yesokethi.
Ngoku ukuba ufuna ukwazi ukuba ngawaphi amanyathelo okanye iindlela ekunokuconjululwa ngazo lo mbandela weCanon MX922 ukhankanywe apha ngezantsi, yiya nje ngamanqaku kwaye uya kufumana umshicileli wakho usebenze ngokwesiqhelo kwakhona.
Lungisa i-Canon MX922 Printa engaPrintanga Imiba:
Okokuqala tshintshela kwiprinta yakho yeCanon MX922.
Emva koko nqakraza kuseto lokukhetha kwipaneli yolawulo lomshicileli.
Apho khetha ukhetho lwe-LAN engenazingcingo kwaye ucofe iqhosha elilungile.
Khetha ukuseta ngokulula kwaye ucofe iqhosha elilungile kwakhona.
Cofa kwindawo yokufikelela ngoku chwetheza igama eligqithisiweyo le-Wi-Fi kwaye ucofe u-ok kwakhona.
Ngoku faka i-CD yokufaka kwikhompyuter yakho kwaye ucofe inkqubo yokuseta.
Ngoku nqakraza kwinkqubo yokufaka.
Nje ukuba yenziwe yenziwe cofa ekugqibeleni.
Kwaye kwakhona kuqala jonga umshicileli wakho kwaye emva koko uqalise ukuprinta uvavanyo lwakho ngeenjongo zokulinga.
Nangona kunjalo, ukuba ufuna isikhokelo esifanelekileyo kuya kufuneka uye Ukulungiswa kwePrinta yeCanon kufutshane nam , ukugcina ukusuka kutyelelo lwakho kule venkile kunokukunceda, njengoko ungathatha umshicileli wakho ukuba ayokulungisa kwezona nkonzo zibalaseleyo ezinikezela ngamagcisa kunye neenkonzo zawo ziyanelisa.
# canon mx922 ayiprintwa #canon mx922 ayizuprinta #canon mx922 ayizuprinta # kutheni icanon yam mx922 ingashicileli #canon mx922 iphrinta iyekile ukuprinta
Ukuqhekeza udliwanondlebe lwenkqubo
Ixesha langempela lokusasaza isitokhwe
Uqikelelo lwamaxabiso engqekembe ye-tnb
python endaweni yeempawu ezininzi
uyithenga njani itheta
indlela yokuthengisa ithokheni yokusitheka